KỌMPUTA LAPTỌỌPỤ KACHASỊ MMA 2018: OGO N'ELU 10 - NSOGBU EGWUREGWU - 2019
10 laptọọpụ ebe ị nwere ike igwu egwuregwu kachasị egwu
Laptọọpụ egwuregwu na 2018 gosipụtara na cyberworld zuru ezu na ngwaọrụ dị jụụ na ergonomic nwere ike ime ka ígwè dị jụụ, dị njikere ịmepụta ezigbo elekota na laptọọpụ ka ọ na-agba ọsọ egwuregwu kachasị ike nke 60 FPS na ndị ọzọ.
Enwere oge mgbe enwereghị echiche nke "laptọọpụ ịgba chaa chaa" nke dị mkpa, ma ọtụtụ ụdị ndị ọzọ dị mma na-apụta n'ahịa ndị na-abaghị uru na arụmọrụ na mgbakọ kọmputa.
N'okpuru ebe a bụ nchịkọta akụkọ nke laptọọpụ kasị mma na-egwu egwu na 2018, bụ nke nweelarịrị ndị nwe ha obi ụtọ n'egwuregwu egwu na-enweghị ihe ọ bụla.
MSI GP73 8E Leopard - si 85,000 rubles
DELL INSPIRON 7577 - site na 77,000 rubles
Xiaomi Mi Gaming Laptọọpụ - si 68 000 rubles
Acer Predator Helios 300 - si 80,000 rubles
ASUS ROG Strix SCAR II GL504GM - site na 115,000 rubles
MSI GT83VR 7RE Titan SLI - site na 200,000 rubles
MSI GS60 2QE Ghost Pro 4K - site na 123,000 rubles
ASUS ROG Zephyrus S GX531GS - site na 160,000 rubles
Razer Blade Pro 13 - 220 000 rubles
Acer PREDATOR 21 X - site na 660 000 rubles
Ejiri ya maka ogologo oge nke egwuregwu egwuregwu na-aga n'ihu, MSI Leopard nwere ihe niile nke laptọọpụ egwu. Nke a bụ ihe dị oke kilogram 2.7 na nnukwu Core i7 na klas nke GTX 1060 dị mma maka 6 GB nke nchekwa vidiyo. Ngwunye a na-emepụta foto mara mma n'ekwughị na ọhụụ zuru oke dị na 17.3 na Full HD. Ụgwọ nke ihe nlereanya ahụ dị iche iche na 85 ruo 110 puku rubles, dabere na RAM wuru na ebe nchekwa anụ ahụ. Ihe kachasị ọnụ ala na-enye ndị ọrụ 8 GB nke RAM na otu ụgbọala siri ike TB 1.
Egwuregwu ahụ FPS na ntọala kachasị elu
Agha v 68
Tom Clancy egwurugwu isii: Ibu 84
Nkwenye nke onye agha: Odyssey 48
PlayerUnknown si agha 61
Ịdị mma dị mma, ma laptọọpụ nke na-arụpụta ihe na ụlọ ọrụ DELL na-enye ndị na-eme egwuregwu ka ha nwee ihu ọma n'ihu ihuenyo ahụ karịa na ọ gaghị atụ anya nbudata ọzọ. Egwuregwu ndị na-ebu nje SSD, nke a na-etinye n'ime ikpe ahụ, yana mmemme, na sistemụ arụmọrụ na-arụ ọrụ ozugbo. N'eziokwu, 256 GB nwere ike ọ gaghị ezuru onye ọ bụla. N'ibu arọ nke egwuregwu nke oge a, nkwụsị nke ndị na-emepụta DELL pụrụ ịghọ ihe dị egwu. Otú ọ dị, laptọọpụ ndị ọzọ maka ego gị dị mma. 8 GB nke RAM, Core i5 7300HQ, GTX 1060 6GB - ihe nile zuru ezu maka onye gamerụ aka.
Agha 1 58
Bilie nke Tomb Raider 55
PlayerUnknown si agha 40
Onye amoosu 3 35
Akwụkwọ Xiaomi ederede Chinese na-egwu egwu bụ nnukwu nhọrọ maka ego gị. Ee, nke a abụghị n'elu, mana ngwaike bara uru! Intel Core i5 7300HQ na GTX 1050Ti na-akwalite egwuregwu nke oge a na ntọala dị elu, ma na-agbakwụnye na ịzụta puku mmadụ iri abụọ ị nwere ike ịzụta ngwaọrụ ya na kaadị GTX 1060. Ngbanwe ahụ ga-emetụta mmụba nke RAM site na 8 GB ruo 6.
Nnukwu mkpu 5 60
Okpukpo nke onye ogbugbu: Origins 40
Dota 2 124
Acer mara mma ma dị ike na-egosi na oge ọjọọ nke ụlọ ọrụ ahụ adịla anya. Ngwa laptọọpụ dị egwu nke oge a agaghị ekwe ka e kwe nkwa ịgba egwu n'oge dị oké mkpa. Ụyọkọ usoro nhazi na akara ngosi vidiyo: Core i7 na GTX 1060. 8 GB nke RAM zuru ezu maka ọtụtụ egwuregwu, ma ọbụna nchịkọta ọzọ ga-eweta mgbakọ ahụ: ihe metal, yana ike ịmechi ngwaọrụ ahụ iji kpọchie dị ka aesthetes na ndị nche.
Agha 1 61
Onye amoosu 3 50
GTA V 62
Kpọọ Ọrụ: WWI 103
Otu laptọọpụ si Asus dị ọnụ ọnụ karịa otu narị puku na-adaba ọnụ ọnụahịa. Naanị lelee ya anya: ọ bụghị naanị na ọ dị mma nke ọma, ya mere, egwuregwu dị egwu na-ama jijiji n'ime obi nke ngwaọrụ a. Ihe nhazi isii nke isi Ram na 7 GB nke Ram ga-enye aka ikpughe GTX 1060 n'ebube ya nile. Full HD 15.5-inch monitor with high-quality IPS-matrix - nke a bụ ihe n'ezie ga-amasị ndị egwuregwu. N'ime ikpe dabara drives abụọ - SSD 128 GB na HDD 1 TB.
Onwu akwukwo odyssey 50
Agha v 85
Forza Horizon 4 80
Atụla anya na ọnụahịa dị elu nke laptọọpụ MSI. Anụ anụ a dị njikere ịkwanye egwuregwu ọ bụla ka ọ bụrụ ihe ọ bụla, ọ na-ezukọkwa na akọ na uche. Nnukwu ihuenyo 18.4-anụ ọhịa na Full HD mkpebi na-emepụta foto dị ụtọ nke NVIDIA GeForce GTX 1070 mere na 8 GB nke nchekwa vidiyo. Ngwaọrụ ahụ nwekwara quad-core Core i7 processor na 2900 MHz na DDR4 16 GB nke Ram, expandable 64. Ngwaọrụ maka egwuregwu dị mma.
Onye amoosu 3 102
Onwu akwukwo odyssey 68
Ngwa MSI ọzọ ejiri mee ka onye ọrụ ahụ nwee ihuenyo dị mma 4K. Na ngosi 15.4 nke anụ ọhịa, foto ahụ dị ịtụnanya. Otú ọ dị, ọ ga-ekwe omume ime ka ihuenyo dị ntakịrị, n'ihi na mkpebi ahụ na-enye ohere. O doro anya na, n'ihi ịkọ ọnụ, ndị na-emepụta MSI kpebiri ịhapụ akwụkwọ mpịakọta ahụ na obere akụkụ. Ajụjụ na-emetụkwa banyere njuputa ngwaọrụ ahụ. Tupu anyị bụ Core i7 na GTX 970M. Kedu ihe mere naadị vidiyo 10? Ọbụna nsụgharị mobile nke 970 GTX ga-enye ugbu a nkwekọrịta ụfọdụ ụdị 10xx. Akụkụ bụ isi nke ngwaọrụ a abụghị na ntụ. Mgbe ị na-elele anya na ihuenyo, ị gaghị enwe ike iwepụ onwe gị na ya.
Onye amoosu 3 33
Agha agha ụwa 58
Ụgha 4 55
Ọhụrụ si ASUS yiri ka ọ si n'ọdịnihu. Ngwa magburu onwe ya na njirimara dị mma ma dị mma. Isi isii isi Coffee Coffee Core i7 na GTX 1070 bụ ezigbo ihe ngwọta nye ndị na-achọ ihe ntanetị kachasị. Ikọ edemede IPS dị elu na-enye gị ohere inwe mmetụta dị ukwuu. Ahụ chọrọ nlezianya pụrụ iche: ụdị nchịkọta dị elu dị otú ahụ dị oke mma, na azụ azụ nke keyboard bụ ego ọzọ ka mma.
Witcher 3 61
Oghere isii nke isii 165
PlayerUnknown si agha 112
Onwu akwukwo odyssey 64
Enwe obi ụtọ site na ụlọ ọrụ Razer ga-ekwe ka ndị egwuregwu banye n'ime ikuku egwuregwu n'egosipụta 4K-ngosi. Ihe a magburu onwe ya magburu onwe ya na-egbuke egbuke agaghị ahapụ onye ọ bụla na-enweghị mmasị! N'okwu a, laptọọpụ dị njikere ịrụ ọrụ n'emeghị mgbatị ruo ogologo awa isii, nke dị oke mma. N'ezie, ngwa dị otú ahụ dị ike ga-agbapụ ma na-ata ahụhụ ntakịrị mgbe a na-eji ya eme ihe, n'ihi na ndị na-ekpo ọkụ n'ime akpa ahụ mepụtara ezigbo ifufe.
Egwuregwu ahụ FPS na ntọala kachasị elu (4k)
Ebibi 2 35
Ogologo mmiri 48
Deus Ex: E kewara mmadụ 25
Agha 1 65
Ndị na-agụ akwụkwọ kwesịrị ịma banyere ịdị adị nke laptọọpụ a kachasị elu site na Acer. Ngwaọrụ ahụ dịka ụgbọ ala, mana ọ na-egosi na ego ndị dị otú ahụ ziri ezi? N'ihu n'ihu anyị bụ ihuenyo zuru ezu Full HD, nhazi mara mma ọ bụ ezie na ọ dị ihe dị ka kilogram itoolu, ma ọ dị oke. Core i7 na GTX 1080 na-agbapụ n'ime obi ike a. Egwuregwu anaghị enwe ebe ị ga-aga ma ọ bụghị ịga na ultra-ntọala ma mee onye na-egwu egwuregwu na FPS kachasị. Anyị ekwesịghị ikwu banyere ọdịdị - anyị bụ naanị laptọọpụ sitere na mbara igwe efu, ọdịdị nke zuru oke ikike.
Onye ohi 214
Deus Ex: E kewara mmadụ 64
Bilie nke Tomb Raider 99
Laptọọpụ a na-asọpụta na-agba ọsọ egwuregwu na ntọala kachasị elu na-enweghị draps FPS na lags. Maka egwuregwu dị mma, ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ maka mkpụrụ obi: mgbe ụfọdụ, nhazi dị mma maka egwuregwu egwuregwu, ma mgbe ụfọdụ maka ọrụ AAA dị elu, a chọrọ laptọọpụ kasị ike. Nhọrọ a bụ nke gị!